किन इनबाउन्ड कलहरू तपाईंको ग्राहकको यात्राको लागि महत्वपूर्ण छन् Martech Zone
किन इनबाउन्ड कलहरू तपाईंको ग्राहकको यात्राको लागि महत्वपूर्ण छन्
सोमबार, मार्च 2, 2015 सोमबार, मार्च 2, 2015 Douglas Karr
मैले स्वीकार गर्नु पर्छ कि म कलको बारेमा डरलाग्दो छु र मलाई थाहा छ कि म मेरो व्यापारको साथ टेबलमा पैसा छोड्दैछु। मेरो फोन प्राय: दिनभरि बजिरहन्छ र मानिसहरूले सन्देश छोड्ने चिन्ता गर्दैनन्, तिनीहरू केवल अघि बढ्छन्। मेरो अनुमान के छ कि तिनीहरू केवल एक अनुत्तरदायी कम्पनी संग काम गर्न चाहँदैनन् र फोनको उत्तर दिन त्यो एक सूचक हो। विपरित सत्य हो - हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई धेरै ग्रहणशील छ। यद्यपि यो हाम्रो सम्भावनाहरू हो जुन प्रायः अलग गरीन्छ। राम्रो छैन!
र प्रमाण यहाँ छ:
Real२% ती वास्तविक व्यक्तिसँग कुरा गर्न सक्दैनन् भन्छन् कि यसले उनीहरूको खरीदको निर्णयलाई प्रभाव पारेको छ।
यो इन्फोग्राफिकले केहि थप अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ जुन मलाई एक सक्रिय र उत्तरदायी कल रणनीति हुन आवश्यक संसाधनहरूमा तान्नको लागि धक्का दिइरहेको छ। डायलगटेक (पहिले Ifbyphone) उद्योगमा विभिन्न स्रोतहरूबाट यो डाटा राख्छ - र यो राम्रो खोजी गर्न लायक छ!
डायलगटेक कल मा एक नेता हो विश्लेषण र उद्यमहरू, एजेन्सीहरू, र छिटो बढ्ने कम्पनीहरूको लागि स्वचालन।
टैग: कलहरूग्राहक यात्रासम्वादयदि फोनइनबाउन्ड कलहरूफोन कल